ကလိုစေးထူး: စပ်မိစပ်ရာ… (၁၅)
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:23 PM
I just realize how nasty and stupid Myat Khine is. He is going to payabig price. wait and see, guys!!
Dec 6, 2007, 5:14:00 AM
Thanksalot for sharing mm press release news. I never ever read it before.
They could not even qualified enough to talk/release news for their lies.(or because those are lies, it could be seen easily).
Dec 6, 2007, 6:58:00 AM
အမေး အဖြေ အပိုင်းက အဖြေတွေက ရယ်စရာအကောင်းဆုံးပဲ ။
Dec 6, 2007, 8:03:00 AM
အရင်တုန်းက ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုသူတို့ လုပ်ခဲ့သေး တယ်၊ ‘မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်းရမည်’ ဆိုတာ လေ...၊ တကယ်တော့အဲဒီဆောင်ပုဒ်ကမပြည့်မစုံဖြစ် နေခဲ့တာ၊ အမှန်ဆိုရင် မြန်မာ့အားကစားဂျာနယ်ကမ္ဘာ ကိုလွှမ်းရမည် လို့ဖြစ်ရမှာဗျ၊ ထွက်လိုက်တဲ့ အားကစား ဂျာနယ်တွေ ဆိုတာ..၊ အင်း....မြန်မာ့အားကစား ကတော့ ကမ္ဘာကို လွမ်းသွားခဲ့တာ ကြာပြီကောဗျာ....။
Dec 6, 2007, 3:15:00 PM
တကယ်လို့သာအမျိုးသမီးအဖွဲ့မှာ သူတိုလူတွေဝင်လာရင်တော့သေချာပေါက် ရှုံးမှာ..
အခုအခိုက်အတန့်လေးကံကောင်းလို့ လူတော်တွေ နေရာရနေကြတာ
Dec 6, 2007, 4:37:00 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ.. မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်..း(
ကိုစေးထူးပြောသလိုပဲ နိုင်ငံကို ကယ်တင်ထားတဲ့ ကယ်တင်နိုင်လွန်းသူ မောင်မင်းကြီးသားများ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ…။
Dec 6, 2007, 9:39:00 PM
Dec 8, 2007, 4:36:00 PM